चीनमा नेपाली कामदार : महिनाभरी काम, ज्याला ५ हजार मात्रै ! | Sagarmatha TV
चीनमा नेपाली कामदार : महिनाभरी काम, ज्याला ५ हजार मात्रै !
काठमाडौं- नेपालीको प्रमुख आम्दानी मध्येको एक वैदेशिक रोजगारी हो । धेरै आम्दानी गर्ने वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि भने सँधै पीडादायी हुने गरेको छ । मलेसिया तथा खाडीका मुलुक तथा अन्य मुलूक पुगेन नेपाली श्रमिक जताजतै ठगिने गरेका छन् ।
नेपालमा म्यानपावर कम्पनी र दलालबाट ठगीमा पर्ने कामदार विदेशमा पुगेपछि कम्पनीका मालिकबाट ठगिने गरेका छन् । यो समस्या पछिल्लो श्रम गन्तव्यका रुपमा विकास हुँदै गरेको छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि देखिएको छ । रोजगारीका लागि चीन पुगेका ४४ जना महिला सम्झौता अनुसारको सेवासुविधा नहुँदा नेपाल फर्किएका छन् । उनीहरु अहिले आफूहरु पीडित भएको भन्दै न्याय माग्दै वैदेशिक विभाग धाउन थालेका छन् ।
सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा नपाएपछि पीडित बनेका महिलाहरु न्याय माग्दै वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका छन् । म्यानपावर सञ्चालक राम कार्कीले मासिक ५ सय डलर कमाइ हुन्छ भनेर चीन रोजगारीमा पठाएपनि भनेजस्तो नभएको वैदेशिक रोजगार विभागमा पुगेकी ताप्लेजुङकी सुनिता लिम्बूले बताइन् । गौशालास्थित कम्पास रिक्र्युटमेन्ट म्यानपावरले कपडा प्याकिङ गर्ने कामका साथै आकर्षक तलब पाइने भनेर पठाएको नुवाकोटकी चिनीमायाँ तामाङले बताइन ।
४४ महिला रोजगारीमा पठाउने कम्पास रिक्र्युटमेन्ट म्यानपावर सञ्चालक भने सम्पर्कमा नआएको पीडित महिलाहरुले बताएका छन् । उनीहरु हाल विभागमा म्यानपावर कम्पनीका नाममा उजुरी दिएका छन् । घटनाका बारेमा अनुसन्धान गरेर म्यानपावर कम्पनीमाथि कारवाही हुने विभागका निर्देशक हरी ज्ञवालीले बताए । म्यानपावर कम्पनीले कसरी चीन पठायो र किन सम्झौता अनुसारको काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गरिने ज्ञवालीले बताए ।